Loans | A Bank | Reliable Commercial Bank in Myanmar
(+95-9) 770 707 888
စာရင်း ပိုထုတ်ချေးငွေ (Overdraft)
စိုက်ပျိုး/မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းချေးငွေ (Agricultural Loans)
အငှားဝယ် စနစ်ချေးငွေ (Hire Purchase)
နှစ်လတ် / နှစ်ရှည် ချေးငွေ (Medium Term/Long Term Loans)
စီမံကိန်း အခြေပြု ချေးငွေ (Project Loans)
ဘဏ်အာမခံစာတန်း (Bank Guarantee)
ချေးငွေ ထုတ်ချေးမည့် ကဏ္ဍများ
(၁)တိုင်းဒေသကြီး ဖွံဖြိုး တိုးတက်စေရန် ပံ့ပိုးမှု ကဏ္ဍ။
တိုင်းဒေသကြီး ဖွံဖြိုး တိုးတက်ရန် တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ လယ်ယာကဏ္ဍ နှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများကြောင့် ဒေသ ဖွံဖြိုး တိုးတက်မှု အပေါ် အထောက်အကူ ပြုသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်သည့် SME လုပ်ငန်းများ၊ ငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှု အဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်းများ၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီး သွားလာရေး ကဏ္ဍများ၊ ကဏ္ဍအသီးသီးရှိ လုပ်ငန်းများ အတွက် ထုတ်ချေးသည့် ချေးငွေများ။
(၂)လယ်ယာကဏ္ဍ ဖွံဖြိုး တိုးတက်စေရန် ပံ့ပိုးမှုကဏ္ဍ။
လယ်ယာကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေရန် လိုအပ်သော ငွေကြေး အရင်းအနှီးနှင့် သွင်းအားစုများ ရရှိစေရန် ရာသီလိုက် စိုက်ပျိုးစရိတ် လိုအပ်ချက်များ၊ မျိုးစေ့ ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ ဆန်စက် လုပ်ငန်းများ၊ တိရိစ္ဆာန် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ၊ ဒေသထွက်ကုန် အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များ အတွက် ထုတ်ချေးသော ချေးငွေများ၊ စံပြလယ်ယာ ဖော်ထုတ်မှုများ အပြင် ၎င်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည် ဖော်မည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများသို့ ထုတ်ချေးသော ချေးငွေများ။
(၃) စက်မှုကဏ္ဍများ ဖွံဖြိုး တိုးတက်စေရန် ပံ့ပိုးမှုကဏ္ဍ။
ပို့ကုန် အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖွံဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် အဓိက ကျသော အခြေခံ အဆောက်အဦးများ တည်ဆောက်ရေး၊ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး စီမံကိန်း၊ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း၊ ပုသိမ်ဆိပ်ကမ်း ၊ စက်မှုဇုန် ၊ လယ်ယာထွက်ကုန် ပစ္စည်း ကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက် ဆန်စက် တည်ဆောက်မှုများ၊ ဒေသ ထွက်ကုန်များ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရန် အတွက် သိုလှောင်ရုံ တည်ထောင်ခြင်း၊ မွမ်းမံပြုပြင် အဆင့်မြှင့်ခြင်း စသော လုပ်ငန်းများ အတွက် ပံ့ပိုးပေးမည့် ချေးငွေများ။
(၄)လူသုံးကုန် ပစ္စည်းများ အတွက် ချေးငွေ ပံ့ပိုးမှုကဏ္ဍ။
လူနေမှု အဆင့်အတန်း အတွက် လိုအပ်သော လူသုံးကုန် ပစ္စည်းများနှင့် လယ်ယာကဏ္ဍ ဖွံဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်များ ထွက်ရှိရေး၊ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ အတွက် အထောက်အကူ ပြုသော လယ်ယာသုံး ကိရိယာများ အရစ်ကျ စနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ရန် အတွက် ကူညီပံ့ပိုးသော ချေးငွေ။
(၅)ဘဏ်အာမခံစာတမ်းနှင့် အခြား ဆောင်ရွက်ချက်များ။
လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရန် ချုပ်ဆိုသော ကန်ထရိုက် စာချုပ်များတွင် လုပ်ငန်း ပြီးမြောက်ခြင်း မရှိက ပေးလျော်ရန် အာမခံ စာတမ်း ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီ ပံ့ပိုးသော ဝန်ဆောင်မှု။
ဘဏ်မှ လက်ခံမည့် အပေါင် အာမခံ ပစ္စည်းများ
(၁) မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော အာမခံပစ္စည်း (Immovable Property)
(ပိုင်ဆိုင်မှု စာချုပ် စာချုပ်စာတမ်းများ အပေါင်ပြုခြင်း)
(၂) အပ်ငွေစာရင်း လက်ကျန်များ(Lien)
(၃) ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများ (ကုန်ပစ္စည်းနှင့် စက်ပစ္စည်းများ လက်ရောက်ပေါင်)(Movable Property)
(၄) ရွှေထည် အာမခံပစ္စည်းများ (Gold and Jewellery)
(၅) အငှားဝယ် စနစ်အတွက် ဝယ်ယူသည့် ပစ္စည်း၏ အရောင်း ဘောက်ချာများ ၊ စာချုပ်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဝယ်ယူသော ပစ္စည်း အာမခံများ (Hire Purchase)
(၆) ကြွေးမြီ လွှဲပြောင်းခြင်း အာမခံ (Assignment of Debt)
(၇) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြု လက်မှတ် (ပုံစံ-၇)(တောင်သူ လယ်သမားများ ၊ အထူးပြု ကုမ္ပဏီများ၊ စံပြ လယ်ယာမြေများ)(Land Ownership Certificate Form(7))
(၈) စီမံကိန်းများ (Projects) အတွက် စီမံကိန်း အာမခံများ။
(၉) လူပုဂ္ဂိုလ် အာမခံ (Personal Guarantee) နှင့်ဘဏ်မှ လက်ခံသော အခြား အာမခံ ပုံစံများ။
ချေးငွေ အတိုးနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင် ၁၀% ဖြစ်ပါသည်။ အတိုးကို သုံးလတစ်ကြိမ် ဇွန်လ၊ စက်တင်ဘာလ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၊ မတ်လ တို့တွင် ပေးသွင်း ရပါမည်။
Standing with you Business Banking
ကုမ္ပဏီများ၊ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သင့်လျော်အသုံး၀င်ပါသည်။
တစ်နှစ်လျှင် ၇% အတိုးပေးပါသည်။
တစ်နှစ်အတွက် ၈% အတိုး။
လက်ကျန်ငွေကျပ် တစ်သိန်း နှင့် အထက်ပေါ်တွင် ၅% အတိုးပေးပါသည်။
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းချေးငွေများ၊ အရစ်ကျအလတ်စား၊ ရေရှည်ချေးငွေနှင့်စီမံကိန်းချေးငွေလုပ်ငန်း။
အရောင်းအဝယ်ကိစ္စများ၊ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုများ၊ လုပ်အားခများနှင့် အခြားသောလုပ် ဆောင်ချက်များ လုပ်ဆောင်သောလုပ်ငန်းများအတွက် ကာလတိုချေးငွေအမျိုးအစားဖြစ် သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုလျှင်မြန်စွာဖြင့် အဆင်ပြေပြေပိုင်ဆိုင်သူရှိရာ ဘဏ်ခွဲများသို့ ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့ပါသည်။
ကော်မရှင်သည် ငွေကျပ် ၁၀ဝ အတွက် ၁၀ ပြားကောက်ခံပါသည် ကနဦး ကော်မရှင်ငွေသည် ကျပ်၁၀ဝ မှ ကျပ် ၃၀ဝ၀၀ ရှိပါသည်။
No. (108), Corner of Kabaraye Pagoda Road and NatMauk Road, BoCho (1) Quarter, Bahan Township,Yangon, Myanmar.
(+951) 9559199, (+951) 9559399
(+951) 8430963 ~ 66
(+95-9) 770707888 ( Hotline )
© Copyright 2018 - A Bank. Developed by DataLink Company Limited.